विराटनगर कोरोना महामारीको उच्च जोखिममा छ, यो अवस्था अझै केही समय रहन्छ
१५ मिनेटका निद्रा गुमाउँदा पनि बढ्छ तौल
मुख्य पृष्ठप्रदेश १विराटनगर कोरोना महामारीको उच्च जोखिममा छ, यो अवस्था अझै केही समय रहन्छ
भारतसँग खुला सीमा जोडिएका कारण विराटनगर कोरोना महामारीको उच्च जोखिममा छ । विराटनगर महानगरपालिकाले सम्भावित जोखिम नियन्त्रणका लागि काम पनि गरिरहेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रमेश कार्की परीक्षणको दायरा नबढेका कारण जोखिम उच्च रहेको बताउँछन् । जनस्वास्थ्य विज्ञसमेत रहेका कार्कीसँग सम्भावित महामारी नियन्त्रणका लागि भएका कामका विषयमा रहेर गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।
कोरोना संक्रमणकालमा दैनिकी कसरी बितिरहेको छ ?
नोबेल कोरोना भाइरस आएको सुरुआती दिनदेखि नै यसको विषयमा गम्भीरताका साथ काम गरिरहेका छौं ।
महानगरपालिका प्रत्येक दिन यस विषयमा अपटेड छ । र, यसलाई चाहिँ नौलो तरिकाले कसरी काम गर्न सकिन्छ, यसलाई रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी सुरुआती दिनदेखि नै नियमित काम गरिरहेका छौं ।
विराटनगर महानगरमा कोरोना संक्रमणको जोखिमको अवस्था कस्तो छ ?
पछिल्लो समय र अहिले समयको तुलना गर्दा संक्रमणको अवस्था जोखिम उच्च नै छ । विश्वब्यापी रूपमा यसको अनुभव धेरै देशहरूले गरेका थिएनन् ।
सार्स २००२, जीका भाइरस, स्वाइन फ्लू अरु मुकुलहरूले अनुभव गरेर सहजीकरण गरिसकेका छन् ।
हाम्रो देश हरेक कुरामा पछाडि परेको मुलुक हो । संक्रमितहरूको कुरामा पनि हामीले सकेसम्म, हाम्रो पहुँचले भ्याएसम्म गरिरहेका छौं ।
तर, पनि विराटनगर महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखाले सरलीकरण कसरी गर्ने, राम्रो कसरी बनाउने भन्ने कुरामा प्रतिवद्ध भएर लागिपरेका छौं ।
डब्लुएचओले हालै सार्वजनिक गरेको रिपोर्टले एकदम थोरै प्रतिशतले मात्र भाइरस सार्न सक्ने देखिन्छ । विराटनगरमा पक्कै पनि जोखिम छ तर, विराटनगर महानगरपालिकासँग राम्रो प्लान छ ।
हाम्रो प्लानमा कतिपय कुरामा हामी सफल पनि भएका छौं । र, यसको भयावह स्थितिलाई रोक्नका लागि के कस्तो गर्नु पर्छ भनेर आगामी दिनहरूमा हामीसँग प्लान छ ।
लकडाउनको दुई महिनापछि विराटनगरका बजारहरू खुला भए, यसले झन जोखिम बढाउँदैन र ?
लकडाउन भनेको भाइरसको उपचार होइन भनेर बुझ्नु आवश्यक छ । लकडाउन भनेको एउटा प्लान गर्न दिएको समय हो । विराटनगर महानगरपालिकाले संघीय सरकारभन्दा ८ घण्टा अगाडि लकडाउन गरेको थियो । लकडाउन के का लागि, त्यो कुरालाई बुझ्नु पर्छ ।
लकडाउनको समयमा क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनलगायतका कुराको विकास, कसरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बढाउने, पीसीआर कसरी बढाउने, आरडीटी कसरी बढाउनेजस्ता कुरामा छलफल गरेका थियौं । पहिलो चरणमा हामीले गरेको लकडाउनको समयमा, संसारका सबैतिर त्यहीँ चलन चलिरहेको थियो । सबैतिर त्यहीँ चलिरहेको हुँदा अभ्यस्त हुन सकेनौं । एउटा कामपछि अर्को काम सिक्दै जाने हो । यदि अरु रोगमा जस्तो यो रोगमा सिकाई पहिलाबाट भएको भए पक्कै पनि हामी केही गर्न सक्थ्यौं ।
राज्यले लकडाउनलाई जसरी केन्द्रित गर्नु पर्थ्यो, बजार व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्थ्यो, दैनिक कमाएर खाने मानिसहरू, व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूमा ध्यान दिन नसकेको कारणले अर्थव्यवस्ता कमजोर भयो ।
यस विषयमा गम्भीर छलफल गरेर, सामाजिक दूरी अपनाएर, पर्सनल हाइजिन मेन्टेन गरेर, मास्क तथा स्यानीटाईजर प्रयोग गरेर विस्तारै लकडाउन खोल्दै जानु पर्ने कुरा हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौं । लकडाउन अन्तिम निर्णय होइन । सधैं लकडाउन गरेर अगाडि बढ्न सकिँदैन ।
हिजो संक्रमण नदेखिदा महानगरले लकडाउन गर्न हतार गर्‍याे । तर अहिले संक्रमण फैलदाचाहिँ लकडाउन पालनामा बेवास्ता भिरहेको छ किन ?
कोरोना भाइरसको हालसम्म कुनै खोप बनिसकेको छैन । र, संसारका विभिन्न देशहरू लागिपरिरहेको हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी खोप बन्नको लागि कम्तिमा १८ महिनादेखि २ वर्षसम्म लाग्न सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले बताएको छ ।
हामी आफैंले खोप बनाउन पनि सक्दैनौं । त्यसैले विराटनगरमा प्रतीरक्षा प्रणालीलाई नै विकशित गर्नु नै महानगरको सोच भए पनि लापरवाही गर्नु हुँदैन ।
विराटनगरमा बस्ने अधिकांश मानिसहरू बुझ्ने र संवेदनशील नै छन् । त्यसैले, आफ्नो पर्सनल स्वभावलाई राम्रो बनाएर, सामाजिक दूरी कायम गर्नु पर्ने कुरालाई ध्यानमा राख्न जरुरी हुन्छ । हामीले भागेरभन्दा पनि लडेर रोगलाई जित्नु पर्ने हुँदा म सबैलाई नआत्तिन अनुरोध गर्छु । आशा गरौँ हाम्रो हर्ड इम्युनिटीले पनि काम गर्छ । हाम्रो हर्ड इम्युनिटीले नै हामीलाई जोगाउँछ भन्नेमा विश्वस्त छु ।
महानगरमा परीक्षणको दायरा किन बढाउन सकिएन ?
महानगरमा दैनिक १५० देखि २०० वटासम्म पीसीआर टेस्ट गर्ने क्यापासिटी छ । जनस्वास्थ्य विज्ञदेखि लिएर हामीसँग जनशक्ति पनि प्रशस्त छ । तर, कोशी ल्याव र धरानमा हुने परिक्षण दुवैको क्यपिसिटी दैनिक २२० ओटा मात्र हो ।
परीक्षणको मात्रा बढाउने कुरा गर्दा ल्याबले नसक्ने, परीक्षण गरेपनि होल्डिङ गर्नुपर्ने, नतिजा आउन समय लाग्ने जस्ता कुराहरू अगाडि आयो । पीसीआर गर्नका लागि लागिएको स्वाबलाई ७२ घण्टाभन्दा माथि राम्ररी मेन्टेन गर्न सकिएन भने नतिजा तल-माथि हुने सम्भावना अधिक रहन्छ । अहिले विराटनगरमा प्रत्येक दिन ५० ओटा पीसीआर भइरहेको छ । पीसीआरको माग बढी छ । हामी गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छौं । तर, ल्याबको क्यापासिटीको कारणले गर्दा नै हामी चुकेका छौँ । यदि लकडाउनको समयमा दैनिक २०० देखि ३०० परीक्षण भएको थियो भने महाशाखाले विराटनगरका मानिसहरूलाई आश्वस्त गर्न सक्ने थियो । हामी यसमा अवश्य पनि चुकेका नै छौं ।
श्रम एरियाहरूलाई सुरक्षा सर्तकता कस्तो छ ?
श्रम एरियामा समन्वय गरेर रहेका ब्यापारिक वर्गहरू तथा संगठनका व्यक्तिहरूलाई पहिले जै सुचित गरेका छौँ । हाललाई हामीले बाहिरबाट आएका केसहरूलाई धेरै प्राथमिकता दिएका कारण बाहिरबाट आएका मानिसहरू छन् भने तुरुन्तै वडाको मार्फतबाट जानकारी गराउन लगाएका छौं । हामी तुरुन्तै तिनीहरूको पीसीआर गराउछौं ।
कोरोना संक्रमण रोकथाम र उपचारका लागि विराटनगर महानगरपालिकाले स्वास्थ्य महाशाखा मार्फत के के गर्‍याे र के गरिरहेको छ ?
विराटनगर महानगरपालिकाले स्वास्थ्य महाशाखाले धेरै कामहरू गरिसकेको छ । नेपालमा दुईवटा केसहरू देखा पर्दै जाँदा विराटनगर विमानस्थल, मालबाहक गाडीहरू आउने आइसिपी मा तथा रानीमा फिभर क्लिनिकहरू सञ्चालनमा ल्यायौं र त्यहाँ पारामेडिक्स स्टाफहरू राख्यौं । र, त्यही आधारमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू गर्‍याैं । विराटनगरका एक्स्पर्टको सहयोगमा पहिलो पटक डिसइन्फेक्ट्यातहरू बनाएर महानगरमा छर्‍याैं । त्यसपछि, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्नुका साथै सम्बन्धित विभिन्न विज्ञ र निकायहरूसँग बसेर यस विषयमा गम्भीर छलफलहरू गरेर अगाडि बढिरहेका छौं ।
कोरोना संक्रमण रोकथामकालागि महानगरमा जनशक्त्ति र स्वास्थ्य सामग्रीको अवस्था कस्तो छ ?
महानगरमा जनशक्त्ति र स्वास्थ्य सामग्री चाहिने जति पर्याप्त छैनन् । कतिपय कुराहरू किन्न नसक्दा सुरुआती दिनहरूमा एकदम गाह्रो भयो । एउटा मास्कको लागि पनि गुहार्नुपर्ने स्थिति आएको थियो । तर, कालाबजारीअन्तर्गत छापा मार्‍याैं, कोशी अस्पताललाई विभिन्न कुराहरूमा सहयोग गर्‍याैं । सामाग्रीहरू नेपालमा नबन्ने, बाहिरबाट आयातित गर्नुपर्ने हुँदा पीपीई, मास्क तथा सेनिटाइजरलगायतका कुरामा जति एक्सपेक्ट गरेका छौं, त्यो पर्याप्त नभए पनि अहिलेको लागि जोहो गरेर राखिएको छ । महामारीको समयमा ३ महिनासम्म पुग्ने सामान स्टोर गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ, त्यो हामीसँग पक्कै पनि छैन । तर, हाललाई केही दिनहरूमा पुग्ने र केही दिनहरूको लागि क्राइसिस हुन नदिनका लागी महाशाखा लागिपरेको छ ।
कोरोना रोकथामका लागि जनप्रतिनिधिबाट कतिको सहयोग पाइरहेका छ, समन्वय कस्तो छ ?
केही कुरामा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएपनि महाशाखाले कोरोना रोकथामका लागि जनप्रतिनिधिहरूबाट सक्दो समन्वय पाएको अवस्था छ । स्वास्थ्यका कुराहरू उहाँहरूले राम्ररी नबुझ्ने हुँदा बुझाउने प्रयास जारी नै छ । संमवेदनशील रहेर सहयोग गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको जिम्मेवारी पनि हो, उहाँहरूले सहयोग नगरे महाशाखाले जनताको सेवा गर्न सक्दैन ।
कोरोना विराटनगरमा सुस्तरी फैलँदै छ । अब विराटनगरमा पनि भयावह अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । यदि अवस्था भयावह भयो भने, महानगरपालिकासँग के कस्तो रोकथामको तयारी छ ?
यो भयावह कतिखेर आउँछ, आउँदैन भन्दा पनि सजकता अपनाउनु पर्ने हुन्छ । भाइरसको उपचार नभएको हुँदा यसको रोकथाम गर्नतिर लाग्नु पर्छ । हामीलाई केही पनि हुँदैन, हाम्रो इम्युनिटी पावर धेरै छ जस्ता कुराहरू गर्नुभन्दा पनि हाम्रो क्षमता कम छ भनेर बुझ्नु आवश्यक छ । स्वास्थ्यका सबै पूर्वाधार नभएपनि हामी यसबाट भाग्ने स्थिति छैन । यो रोगले भोकको पनि अवस्था ल्याएको छ । त्यसैले यसबाट लड्नु नै एक मात्र उपाय हो ।
संक्रमण जोखिमको रोकथामका लागि भनिएको सबै सल्लाह सुझावहरू अपनाएको खण्डमा विराटनगरमा यसले भयावह रूप लिन सक्दैन । तर, गम्भीरता नअपनाए दुर्घटना हुने सम्भावना धेरै रहन्छ ।
पर्याप्त क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र अस्पताल छन् कि छैनन् ?
महानगरमा भएका ५ ओटा क्वारेन्टाइन व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । डब्लुएचओले भनेको सबै मापडण्ड पूरा गरिएको विराटनगरको क्वारेन्टाइन नेपाल अधिराज्यभरि नै सबैभन्दा राम्रो हो ।
यसलाई अझै थप्ने कोशिस जारी नै छ । अहिलेसम्म विराटनगरमा लगभग ३०० हाराहारी मानिसलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर ९० जना जतिलाई रिलिज गरिसकेको छ ।
महानगरपालिकाबासीहरूले कोरोना रोकथामलाई कत्तिको सहयोग गरिरहेका छन् ?
महानगरपालिकाबासीहरूले यस विषसमा अवश्य पनि बुझिसकेका छन् । महानगरबासीहरू आफैं बुझ्ने तथा संवेदनशील नै छन् । विराटनगर एक राजधानी भएको कारणले त्यहाँका बासिन्दाहरूले बुझ्नु नै पर्ने हुन्छ । केही थोरै ब्यक्तिहरूका कारणले महानगरमा नराम्ररी इम्प्याक्ट पर्न जान्छ । तर, यसको गम्भीरतालाई सबैले बुझ्नु पर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ ।
क्वारेन्टाइन बनाएकै विषयमा आन्दोलन पनि भए, स्थानीयबाट किन यसरी असहयोग भएको थियो ?
यो क्वारेन्टाइन किन बनाइएको भन्ने कुरालाई नबुझेर यसतो भएको जसतो लाग्छ । क्वारेन्टाइनमा राखिएको ब्यक्ति आइसोलेसनमा राखेको जस्तै हुन्छ । तर, मानिसहरूले चाही क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूले रोग फैलाउँछ भनेर सोच्न थाले । क्वारेन्टाइनमा मानिसहरू राख्दा उनीहरू झन् धेरै सुरक्षित हुन्छन् भनेर बुझ्न जुरुरी छ ।
क्वारेन्टाइनबाट संक्रमण सर्ने सम्भावना एकदम न्यून हुन्छ । क्वारेन्टाइनमा राखेर टेस्ट गर्दा कोही ब्यक्ति संक्रमित भएको पत्ता लाग्नेबित्तिकै, सोही ठाउँबाट एम्बुलेन्स बोलाएर अस्पताल लगिन्छ । क्वारेन्टाइन बनाउन महानगरवासिहरूले अहिले सहयोग नगरे पछि अफ्ठ्यारो पार्न सक्ने अवस्था निम्ति सक्छ ।
प्रदेश र संघीय सरकारले तपाईंहरूसँग कत्तिको समन्वय गर्छन्, भूमिका दिन्छन् कि दिँदैनन् ?
यसमा अलिकति चुकेका छन् जस्तो लाग्छ । स्थानीयबासीहरूले जसरी स्वास्थ्य महाशाखासँग जस्तो आशा राख्नु भएको छ, त्यस्तै आशा हामीले प्रदेश र संघसँग राखेका हुन्छौं ।
हामीसँग सबै कुराको लागि पुग्ने बजेट पनि छैन । हामीले सहयोग माग्दा, जति आशा राखेका थियौं, त्यति पाएनौं । आरोप लगाउन चाहन्नँ तर, समन्वयकारी भूमीका अलि कमजोर नै रहेको छ ।
यो संकटको बेला प्रदेश र संघीय सरकारसँग के अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
महाशाखाले संकटको बेला प्रदेश र संघीय सरकारसँग ठूलो अपेक्षा राखेको छ । महामारीको बेलामा धेरै क्राइसिसहरू हुन्छन् । लकडाउनमा धेरैले रोजगारी गुमाए, निम्न वर्गका मानिसहरूले पाउनुपर्ने राहत पाएनन् ।
यो बेलामा प्रदेश र संघीय सरकारले अपेक्षाअनुसार जति मद्दत गर्नुपर्थ्यो, अपेक्षा पूरा भएका छैनन् । तर, महाशाखाले विराटनगरबासीलाई आगामी दिनहरूमा केही कमीकमजोरी हुन नदिने सोचेका छौं ।
यो संकटको बेला प्रदेश र संघीय सरकारले राम्रो समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिदिन महाशाखाको आग्रह छ ।
विश्वमा कोरोना संक्रमणको मिटर घट्दै गइरहेको छ तर, नेपालमा भर्खरै बढ्दै गइरहेको छ, तपाईं जनस्वास्थ्य विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, यस्तो किन भयो र नियन्त्रण कसरी गर्ने होला ?
३ देखि ४ महिनाको अन्तरालमा चीनको वुहान, इटालीदेखि लिएर विश्वका घेरै देशहरूमा फरक फरक सिनारियो देखिएको छ । चीनले दिनरात खटेर कोरोनाको महामारीलाई अन्त्य गर्न सम्भव भयो ।
इटाली चिकित्सा उपकरणमा विश्चको दोस्रो राष्ट्र मानिन्छ । तर, त्यहाको स्थितिको बारेमा सबैलाई थाहा नै छ । सँगसँगै दक्षिण कोरियामा राम्रो तरिकाले परीक्षणको दायरा बढाएर, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरेसँगै त्यहाँ मोर्टालीटी रेट एकदम तल झरेर गयो ।
महामारी विज्ञानको सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि संक्रामक रोग एउटा चरम विन्दुसम्म पुग्ने हुन्छ । र, त्यसपछाडि विस्तारै तल झरेर जान्छ । तर, नेपालमा भर्खरै यो अवस्था सुरु भएको छ । सधै यस्तै रहिरहँदैन् ।
नेपालमा परीक्षणको दायरा बढेको कारण संक्रमितको संख्या पनि बढिरहेको देख्न सकिन्छ । हामी अझै परीक्षण बढाउने पक्षमा छौं । खोप नभएको कारणले हर्ड इम्युनिटी बढाउनु नै एक मात्र उपाय रहेको देखिन्छ ।
हालसम्म खोप नबनिसकेको कारणले रोगको नियन्त्रणका लागि रोकथाम गर्न जरुरी छ । जनतालाई परामर्श दिनु नै महत्वपूर्ण कुरा हो । साथै, पर्सनल हाइजिन मेन्टेन गरेर, समाजिक दूरीको अभ्यास, बारम्बार हात धुने, मास्क लगाउने, भिडमा नजाने जस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
सम्भवतः २ देखि ३ महिनामा यो क्रम केही घट्दै जानेछ । नेपालले पनि औषधिको विकासमा अवसर पाएको छ । औषधि सफल भएको खण्डमा नेपालले पहिलो अनुभव गर्ने मौका पाउनुका साथै औषधिले रोगलाई निराकरण गर्न सक्ने सम्भावना पनि प्रवल रहन्छ ।
प्रस्तुति : अंकिता ताम्राकार